Dhawunirodha iwo mapikicha echiitiko munaGunyana 7 | IPhone nhau
Dhawunirodha iwo mapikicha echiitiko chaGunyana 7
Zvinotaridza kuti musi waGunyana 7 rave zuva rakakurumbira zvakadaro, nekuda kwerunyerekupe rwunogumira pamusoro pekuratidzwa kweiyo iPhone nyowani, yakasimbiswa nezuro neApple, serwiyo rweMecano. Nezuro iyo Cupertino-based kambani yakazivisa chiitiko icho chichava ichaitwa Nyamavhuvhu 7 paBill Graham Auditorium muSan Francisco, na10: 00 yemuno nguva uye nekukurumidza vagadziri vatanga kuburitsa fungidziro yavo yekupa iwo mapikicha akafuridzirwa neshure yakashandiswa neApple kushambadziro, mukuwedzera kubvisa chero runyorwa ruripo mumufananidzo iwoyo kuti vashandisi Vagone kurirodha pasi nekushandisa iyo seye Wallpaper pane yavo nhare kana desktop zvigadzirwa.
Chinhu chega chiri pachena ndechekuti musi waGunyana 7 isu pakupedzisira tichazomira kutsikisa nhau uye runyerekupe zvine chekuita neiyo iPhone, kunyanya runyerekupe rwakatanga kuneta pavakatanga kubuda maviri kana matatu pasvondo. Asi isu zvakare tichakwanisa kubvisa kusahadzika uye kusimbisa kana iyo Cupertino-based kambani ichazopedzisira yapa chizvarwa chechipiri cheApple Watch kana kana tichizofanira kumirira iyo yakakosha iyo sekureva kwaMark Gurman Apple ichagadzira kuratidza iyo nyowani Mac mhando.
Iwo mapikicha atinokuratidza pazasi Izvo zvakagadzirwa na @jim_gresham, @Axinen, Alex_Willum, @AppleBetasDev, @ doknos13 uye @ iM4hdi. yega yevagadziri vanotipa akasiyana masisitimu ezvigadzirwa zvakasiyana zveiyo Cupertino-based firm. Mune mamwe isu tinogona chete kurodha vhezheni ye iPhone, zvisinei kune vamwe isu tinowana iyo vhezheni yeApple Watch, iPhone, iPad (kusanganisira Pro) uye desktop vhezheni. Ese mapikicha akagadziriswa kugadziriswa kwemidziyo. Iwe unofanirwa kudzvanya paKutarisa saizi izere kuti uwane iyo yepakutanga faira kurodhaunira musarudzo yayo yekutanga. Panguva uye kana zuva racho rasvika, kuzviyeuchidza isu tinogona kushandisa chero eaya mapikicha.
Inotevera Gunyana 7 iyo Actualidad iPhone timu ichatanga iyo yakajairika michina yechinhu chakakosha uye timu yese ichave iri pasi pecanyon kuzivisa nguva dzese uye kurarama yenhau dzese dzinoburitswa muhotera yeBill Graham muSan Francisco uko kwatinozopedzisira tabvisa kusahadzika nezve iPhone 7.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Dhawunirodha iwo mapikicha echiitiko chaGunyana 7
Iyo ramangwana reiyo iPhone skrini inoenda kuburikidza neMicro-LED tekinoroji, iri nani pane maOLED